10 Tena Mahavariana Gara Ao Espaina | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby Spain > 10 Tena Mahavariana Gara Ao Espaina
Misy maro ny mahaliana sy ny mpanao gara any Espaina. Hahita haingam-pandeha, antonony lavitra, isam-paritra, Metropolitana sy Hotel-fiaran-dalamby mandeha manerana ny firenena. Avy lehibe maoderina toby ho kely kokoa ireo manodidina toetra, ireo dia 10 ny Espaina indrindra Mahavariana gara.
Barcelona, Espaina (Train Station Sants)
Ity onjam-peo maoderina ity dia iray amin'ny ny fiaran-dalamby indrindra ao Barcelona. Izany no tena fiantsonan'ny fiaran-dalamby ho an'ny -pirenena sy iraisam-pirenena fiaran-dalamby fifandraisana. Amin'ity fitobiana ity no somary lehibe sy miorina ao afovoan-tanàna. Izany no ampiasaina amin'ny samy an-toerana ary mpizaha tany ary hampifandray anareo amin'ny gara indrindra manerana an'i Espaina.
Amin'ity fitobiana ity no lehibe indrindra ao Madrid ary efa manodidina nandritra ny taona maro. Izy io dia toerana tsara tarehy ary iray amin'ireo toby fiaran-dalamby tena mahavariana, fa ity tranon'ny zaridaina iray tsara tarehy tany mafana sy ny sokatra fitoerana masina ao anatiny. On March 11, 2004, andro iray any Espaina ankehitriny fantatra toy ny 11-M, 191 ny olona no namoy ny ainy tao amin'ny andiam-baomba. Efatra izy ireo nitranga tamin'ny lamasinina any amin'ity fitobiana ity ary teo akaiky teo.
Santa Justa no fahatelo-toerana be mpandeha indrindra ao Espaina, amin'ny tanteraka ny roa ambin'ny folo sehatra. Izany no atao hoe rehefa afaka iray amin'ireo toerana tena olo-masina i Seville (anabavin'i Santa Rufina). Ny trano no misy ao amin'ny faritra atsinanan'i ny afovoan-tanàna Sevilla. Ny madio sy ny famolavolana manaova no ohatra amin'ny tanàna maoderina ny fandaminana mialoha ataon'ny 1991.
Ronda Voalaza fa iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Espaina. Io Zavatra Mahavariana safidy ny gara dia manoro izany, ary azo antoka fa tsy maintsy-mahita. Ny gara naorina indray tao 1892, na izany aza, izany dia efa fanavaozana sy mahatalanjona foana nandritra ny taona maro. Amin'ny gara mbola manana ny "Anglo" na fanjanahantany Indian maso anefa. Ny hazo-mikiramborambo eloelo dia tohanana amin'ny mpanefy vy andry mifanila naharitra ny sehatra.
Amin'ity fitobiana ity no misy ao an-tanàna tranainy tsara tarehy Zamora. Izany no iray amin'ny malaza indrindra gara tany Espaina noho ny hatsarany izay noho ny faritra sy trano nentim-paharazana, amin'ny takelaka rooves, ashlar vato sy lehibe andohalambo afovoany Mpiahy. Amin'ity fitobiana ity ihany koa fa mahakasika malaza ho nisy teo amin'ny Ruta La Plata ho toy ny fifandraisana toerana.
Amin'ity fitobiana ity no misy tao an-tanànan'i Zamora in Castile sy Leon ary heverina ho iray amin'ireo gara Mahavariana indrindra hatramin'izay atao. Ny fanorenana maintsy nijanona tao 1929 Ary tamin'ny farany vita tamin'ny 1958. Izany dia nahasarika Renaissance aingam-panahy ny sasany antsipiriany izay dia fampahatsiahivana ny tara fomba Gothic. Tena ilainy ny fofonaina-.
Estación do Norte Train Station
Izany gara dia hita tao amin'ny tanànan'i San Sebastian, tsara tarehy fanatitra toerana roa tsy mampino ranomasina ary ny tendrombohitra hevitra. Amin'ity fitobiana ity dia mahasarika ao ny tenany ho toy ny tafo manarona ny sehatra Noforonin'Andriamanitra ny Gustave Eiffel izay ihany no tena olona izay namorona ny Tour Eiffel any Frantsa.
Train Station Canfranc Estación
Izany nilaozan'ny Mahavariana pick ny gara dia azo jerena ao amin'ny sisin-tanin'i Espaina sy ny Frantsa. Ary novohana tany 1928 dia antsoina hoe ny "Titanic 'ny Tendrombohitra."Tsy dia naorina mba hampitombo ara-barotra eo amin'ny firenena roa tonta fa rehefa tsy foana, ary efa nilaozana hatramin'ny 1970. Ny gara dia latsaka ny sekely amin'izao fotoana izao. Mpizaha tany mbola afaka mahita ny mitovy ny fomba lehibe dia amin'ny andro. More Zavatra mpizaha tany no nitsidika ny toerana hatramin'ny 2013. Mihoatra noho ny isan'ny olona izay mbola nitsidika ny gara fony mbola misokatra.
Estacio do Nord Train Station
Izany no tena fiantsonan'ny fiaran-dalamby tao an-tanànan'i Valencia. Dia naorina 1917 ary lasa mariky ny Eoropa modernist maritrano. Izy io dia trano lehibe amin'ny famantaranandro lehibe iray sy ny voromahery sary sokitra eo afovoany, izay ny sasany amin'ireo solontenan'ny indrindra singa amin'ny gara amin'izao fotoana izao. Mahavariana ity pick ny gara koa heverina ho fanorenana ny kolontsaina Interest.
Amin'ity fitobiana ity no misy ao amin'ny tapany ambony Algeciras sy kilometatra vitsivitsy avy ao amin'ny seranan-tsambo noho ny fitakiana ara-tantara izay midika fa tsy maintsy ho avy isan-karazany ny Gibraltar 100 taonina tafondro. Ity fiaran-dalamby ity dia ampiasain'ny olona te-hitsidika ny Vatolampin'ny Gibraltar. Ary dia nisokatra voalohany tao 1982 ary mbola manana sekoly efa ela-hijery ary hahatsapa ho azy.
Na dia maro amin'izy ireo miasa any Espaina ankehitriny, ireo dia 10 ny Espaina mahavariana indrindra gara mba hitsidika. Train Travel dia ampahany lehibe amin'ny fitateram-bahoaka rafitra ao amin'ny firenena, ary nihazakazaka hampandeha tsara manerana ny birao. Misy maromaro tsara ny andro fitsangatsanganana ary koa over-alina niainany ho nanana ny lamasinina, ary tsy hanenenana ny mbola any aoriana mampiasa ny lalamby rehefa mitsidika Espaina.
Tadiavo ny tsara indrindra sy mora indrindra tapakila any Eoropa Save A Train, Maharitra 3 minitra ankehitriny mba hamakiana tapakila fiarandalamby Mamonjy Train. ho any amin'ny gara Mahavariana indrindra ao Espaina, Aloavy mampiasa ny fomba fandoavam-bola malaza ao anatin'izany, carte de crédit sy Paypal.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-fascinating-train-stations-spain%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code
europeantravel fiarandalamby TrainStation Travel travelspain